Jawaab-celin Xujeysan Oo Madaxweyne Siilaanyo Ku Socodsiiyey Danneeyeyaashii Didmada Ka Muujiyey Go’aankii Uu Doorashooyinka Ku Kala Reebay | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM Jawaab-celin Xujeysan Oo Madaxweyne Siilaanyo Ku Socodsiiyey Danneeyeyaashii Didmada Ka Muujiyey Go’aankii Uu Doorashooyinka Ku Kala Reebay
Madaxweynuhu Waxaa Uu Laba Luuqadood Kula Hadlay Cid Kasta Oo Go’aankiisu Ladh Kaga Tegey, Waxaanu Farta Ku Fiiqay Dhadhaab Ku go’an Dariiqa Doorashada Baarlamaanka
“Waxaa Xaqiiqo Ah In Aanu Beesha Caalamka Uga Mahad Celinayno, Abaalna Ugu Cayno Doorashooyinka, Hase Ahaatee Nuxurka Iyo Mucdu Ma Aha Taas!! Ee Arrintu Waxay Tahay….” +++++++++
“Bulshada Caalamku HanagaTaageeraan Doorashada Ama Yaanay Naga Taageerine, Dabcan Doorashadu Waa Muhiim, Laakiin Waqtigu Maaha Muhiimmada 1aad Ka Leh, Annagana Waxa Naga Go’an In……” Hargeysa (Hubaal)- Afhayeenka Aqalka Madaxtooyada JSL Eng. Xuseen Aadan Cige (Deyr) ayaa xalay cawayskii dembe soo saaray laba war-saxaafadeed oo ku socda Bulshada Caalamka, isla markaana Jawaab celin u ah walaacii uu ku beeray go’aankii madaxweynuhu ku kala qaaday labada doorasho ee ay golaha wakiilladuna aqlabiyadda ku meel mariyeen. War-saxaafadeedkan oo ka koobnaa laba nuqul oo ku kala qoran luuqadda Soomaaliga iyo Luuqadda Ingiriisida ayaa afhayeenku ku sababeeyey sirta ka dembeysay go’aankii madaxweynuhu qaatay ee la xidhiidhay dib u dhiga doorashada golaha wakiillada, kaasoo uu sheegay in uu ahaa mid si qoto leh uu madaxweynuhu uga fikiray. Labada nuqul ee War-saxaafadeedyadan oo wada jir u soo gaadhay wargeyska HUBAAL waxaa isaga oo dhamaystiran uu u dhignaa sidan:
“Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Maxamed Silanyo go’aankii uu qaatay in uu dib u dhigo Doorashooyinka Golaha Wakiillada, wuxuu ahaa go’aan uu si qoto dheer uga fikiray, sharci ah oo haysta taageerada bulshada isla markaana salka ku haya Distoorka Qaranka, duruufaha siyaasadeed iyo kuwa farsamo ee haatan ka jira Jamhuuriyadda Somaliland.
Muran kama taagna in Golaha Wakiilladu uu muddo dhaaf yahay, Sidoo kale, waa arrin gar ah in ay muwaadiniintu helaan xuquuqdooda distooriga ah si ay ugu codayn karaan ciddii ay u doortaan inay iyaga u matalaan Golaha Wakiillada JSL,
Hase ahaatee nuxurka iyo mucda arrintu maaha taa!! Ee Arrintu waxay tahay: Ma waxaynu qabanaa doorasho muddaysan oo ay danaynayaan Bulshada Caalamku taas oo ku qabsoonta xilligii ay u qoondeeyeen? Mise waxaynu qabanaa doorasho xor ah, xalaal ah oo ay bulshada JSL ka wada qayb galaan oo ku habboon wadciga, waayaha iyo duruufaha siyaasadeed ee ka jira dalkeena?
Madaxweynaha Axmed Maxamed Siilanyo waa Madaxweyne si xor ah ay u doorteen aqlabiyadda bulshada Jamhuuriyadda Somaliland. Go’aan kasta oo Madaxweynuhu gaadho iyo tallaabo wal oo uu qaado (ha adkaadeen ama ha fududaadeene) waxa saldhiga u ihi waa danaha Qaranka iyo maslaxadaha ummadda. Sidaa darteed, Madaxweynuhu isagoo ka duulaya sida ugu habboon ay danaha ummaddu ku aslaxayaan wuxuu go’aamiyey:
In dib loo dhigo Doorashooyinka Golaha Wakiillada iyadoo la raacayo nidaamka iyo xeerarka u dhigan. Taasoo macnaheedu tahay in ugu horraan Madaxweynuhu qoraal Codsi ah u gudbiyo mudanayaasha Golaha Wakiillada si ay u ansixiyaan. Ansixinta kaddib, Madaxweynuhu qoraal u diri doona Maxkamadda Sare ee Distooriga ah ee JSL, kaddibna waxa loo gudbin doonaa mudanayaasha Golaha Guurtida si ay uga soo talo bixiyaan.
Somaliland maanta waa dal muddo dheerba ku naaloonayey nabadgelyo, degenaansho iyo dimuqraadiyad taam ah oo ku abtirsata nidaamka soo jireenka ah ee aanu dhaqanka u leenahay kaasoo ah wada-tashi, is qancin, isu-tunaasul iyo talo-wadaag iyo in aanu anagu leenahay go’aaminta halka ay ku jiraan danaha iyo maslaxadaha ummaddayadu. Sida ay awalba yeeli jireen, waxaanu ku rajo weynahay in Bulshada Caalamaku ay arrimahayaga nagu tix-gelin doonaan”. Ayaa lagusoo gebogabeeyey war-saxaafadeedka uu soo saaray afhayeenka madaxtooyada Somaliland Eng. Xuseen Aadan Cige (Deyr), oo nuqul kamid ahi soo gaadhay wargeyska HUBAAL xalay cawayskii.